Lauren RAJAOBELINA · Marsa 2014 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Marsa, 2014
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Marsa, 2014
Eoropa Andrefana 20 Marsa 2014
Toy ny divay sy ny voankazo ary ny legioma, dia manana ny anjara toerany lehibe amin'ny saina sy ny sakafo ny holatra, miaraka amin'ny fomba fiaina tsara sy ny vokatra eo an-toerana.
Indonezia : Niteraka Setroka Matevina Nandoto Ny Rivotra iainana Ny Doro Ala Tany Riau
Azia Atsinanana 20 Marsa 2014
Niha- nahery vaika ireo doro ala any amin'ny faritra andrefan'i Indonezia tamin'ity volana ity ka nahatonga setroka ratsy nandoto ny firenena. Tonga hatrany Singapore sy Malezia ihany koa ilay setroka .
Malezia : Voasivana Ilay Boky Misy Ny Tantara An-Tsary ‘Ultraman’ Fa Nampiasa Ny Teny Hoe ‘Allah’
Azia Atsinanana 18 Marsa 2014
Heverin'ny Ministeran'ny atitany Maleziana fa fanozongozonana ny filaminam-bahoaka ny fandikana ny teny hoe Andriamanitra ho Allah ao anatin'ny tantara an-tsary 'Ultraman'
Syria: Izaho No Aleppo, Aleppo Dia Izaho
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Marsa 2014
"Mitovy izahay sy Aleppo : simba, feno afo, misavoritaka," izany no nosoratan'i Marcell Shehwaro, mpitoraka bilaogy / mafana fo, ao amin'ny lahatsoratra voalohany amin'ny andiany momba ny fiainana any Syria mandritra ny tsy fifankahazoana amin'izao fotoana izao.
Nisy ny angano mitantara ny printsesa voahidy anaty tilikambo, fa amin'izao fotoana izao, any Arabia Saodita, printsesa efatra no milaza fa tsy araka ny sitrapony ny hitazonana azy nandritra ny 13 taona.
Saripika : ‘Theyyam’, Fetin'ireo Andriamanitra Any Kerala Any India
Azia Atsimo 16 Marsa 2014
Miaraka amin'ny dobok'amponga sy ireo dihy mahafinaritra, atao isan-taona manomboka ny volana Novambra any amin'ny fiangonana maherin'ny arivo ny fetiben'ny Theyyam.
Noana tajine, hena na trondro ahandroina miaraka amin'ny legioma na voankazo maina avy any Maraoka ? Sa ahoana ny momba ny ravitoto, sakafo vita amin'ny ravi-mangahazo, tongolo be sy henankisoa avy any Madagasikara
Azia Atsimo 14 Marsa 2014
Miresaka ny ady teo amin'ny India sy Pakistana tamin'ny 1971 fotsiny ilay horonan-tsarimihetsika, hadinony ny ady ho fanafahana an'i Bangladesh tamin'i Pakistana.